Burcad - BBC Somali
Magdhow la siinayo Burcad badeed
Maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Yurub ayaa sheegeysa in Faransiiska uu carqaladeeyay xuquuqda burcad badeed Soomaali ah kuwaas oo weeraray maraakiib
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Magdhow la siinayo Burcad badeed
Kings Nehemiah Okeye waa Engineer Negerian ah oo badmareen ahaa 25 sano. Sanadkii 2010 isagoo u shaqeynayay shirkadda saliidda ee Shel ayey burcadbadeed ka afduubteen meel ka baxsan xeebta Nigeira. In ka yar labo sano kaddib ayaa hadana dib loo afduubtay,
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Naaquude 2 jeer lagu afduubay Africa
Qof is qarxiyay Yemen oo keenay dhimasho
Ruux isku soo xiray bam caasimadda Yemen ee sanca ayaa dilay ugu yaraan 40 qof, wuxuuna dhaawacay tiro kale.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Qof is qarxiyay Yemen oo keenay dhimasho
Burcadda Soomaalida ayaa sii daysay kow iyo toban shaqaale markab ooo ay haysteen in kabadan saddex sanno
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Burcad daysay shaqaale markab
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Sawirro maalinta 18-ka May
Xabsi Burcad badeed laga furay Puntland Xabsi casri ah oo loogu talagalay maxaabiista burcad badeeda la xukumay ayaa maanta laga furay magaaldaa Garowe ee Puntland.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Xabsi Burcad badeed laga furay Puntland Maqal
Wafdi ka socda Somaliland ayaa maraya europe si ay maalgashi caalami ah u helaan. waxaa hogaaminaya wafdigan wasiirka dibedda Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Waraysi Wasiirka Ganacsiga ee Somaliland
Baydhabo oo laga taagay calan maamul cusub
27 Jannaayo 2014
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Baydhabo oo laga taagay calan maamul cusub
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Dowladda Belgium oo xirtay Afweyne
7 Maajo 2013
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Sawirro shirka London